हङकङ नेपाली महासंघको भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न
Home हङकङ समाचार हङकङ नेपाली महासंघको भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न
२०११ अगष्त १८। हङकङ नेपाली महासंघको आयोजनामा जोर्डन स्थित फूलवारी रेष्टुरेण्टमा एक अनौपचारीक भेटघाट तथा रात्रीभोज कार्यक्रमको आयोजना गरियो। संस्थाका कार्यसमितिका सदस्यहरु, सदस्य सँस्थाका प्रतिनिधिहरु, सल्हाकारहरु र हंगकंगस्थित बिभिन्न मुख्य सँस्थाहरु एनआरएन, आदिवासी जनजाति महासंघ, हिन्स, आदिबासी जनजाति पत्रकार संघ लगायत हंगकंगका पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो। साथमा भारतिय गोर्खा भुपु सैनिक संघको २१ तारिक हुने कार्यक्रममा नेपालबाट आउनु भएका कलाकारहरु रुप कुमार राई, दुर्गा गुरुङ, सरला राई र राजु गुरुङको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
अनौपचारिक भए पनि कार्यक्रम सँस्थाकी महासचिब रिता गुरुङले स्वागत तथा सञ्चालन गरेकी थिइन्। कार्यक्रम गर्नुको बारेमा अध्यक्ष प्रदिप थापामगरले प्रस्ट्याउँदै आफ्नो भनाई राखेका थिए। यस पछि सल्हाकारहरु हेजेन राई, हेम लिम्बु लगायत मितेरी समाजका अध्यक्ष तुलसी गुरुङ, नेपाली जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष ईश्वर खाँड, भारतिय गोर्खा भुपु सैनिक संघका अध्यक्ष जंग बहादुर गुरुङ, हिन्सका अध्यक्ष बुद्दि बहादुर थापा, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्शका महासचिब डासुराम पराजुली लगायतले महासंघले हाल सम्म राम्रो काम गरिरहेकोमा सहमत भै सँस्थालाई सफलताको कामना गरेका थिए।
यसैगरि आदिवासी जनजातिका अध्यक्ष एमबी थापामगरले खरो र स्पष्ट रुपमा बोल्दा हलमा ताली माथि ताली बजेको थियो। उनले जुन सँस्थाले नेपालीको लागि राम्रो काम गर्छन भने सहयोग गर्न मनले नमाने पनि कति बिरोध नगरौ। हिन्सका अध्यक्ष बुद्दि बहादुर थापाबाट नेपाली समाजले केही सिक्नु पर्ने र त्यो नेपाली समाजको हितको लागि प्रयोग गर्नु पर्ने भनेर उनले खुलेरै मत राखेका थिए। हामी हंगकंगका अति बिशिष्ट सँस्थाहरु आज भेला भएका छौ। अव काम थाल्नु पर्छ र नेपालीको लागि सामुदायिक भवनको लागि अघि बढनु पर्छ। सामजिक सँस्थामा नेपालको फोहोरी राजनीतिक खेल नमिसाउन उनले सबैमा अनुरोध गरेका थिए। उनले भने कि महासंघमा भिजन लियर आउनु पर्यो नत्र भने बाहिर बसेर कराएर, हुने नहुने लेखेर केहि नहुने ठोकुवा गर्दै महासंघको विकल्प पनि नरहेको बताए।
हाल महासंघबाट निस्कने र महासंघमा बसेर पनि केही गर्न नसकेकाहरुले महासँघलाई बिभिन्न आरोप लगाउने गरेका छन्। तर उपस्थित धेरै प्रतिनिधिहरुले महासंघलाई कमजोर बनाउने स्थापना काल देखिनै एक तत्व लागि परेको र त्यो अझै सक्रिय रहेको बारेमा पनि अनौपचारिक बिष्लेसण भएको थियो। स्मरण रहोस चुनाबी प्रतिस्पर्धामा महासंघ भित्र स्पष्ट रुपमा राजनीतिक लगायत जातिय धार देखा परेको थियो।
उक्त रात्री भोजमा नमोबुद्द आमा सामुहकी अध्यक्ष तथा यस बर्षकी आदिवासी बर्ष चेली पदम कुमारी गुरुङले उपस्थित सम्पुर्णलाई प्रश्न गरेकी थिईन् "हामी छोरी, चेली आमाहरुले आफ्नो लागि भवन खरिद गरि सकेका छौ भने तपाईहरु हंगकंगका यत्रा बुद्दिजिबिहरुले किन एउटा भवन अझ खरिद वा सरकारबाट पाउन सक्नुभएको छैन? यो दुख लाग्दो मात्र हैन लाज मर्दो पनि हो।"
महासँघको अहिलेको कार्यसमितिले धेरैले सोचे भन्दा फरक र जनसहभागिता हुने कार्यहरु गरेको छ। जस्तै “जापन रिलिफ ईफोर्ट”, सिएनएन हिरो २०१० अनुराधा कोईराला र साहित्यका धरोहरा डा. ईन्द्र बहादुर राई हंगकंग ल्याएर कार्यक्रम गर्नुका साथै नेपाली सामुदायिक भवन खरिदको लागि लाखौ डलरको बोल कबोल र केही पैसा उठाउन सफल महासँघ भएको छ।
स्मरण रहोस हङकङ नेपाली महासंघको कार्य प्रति गलत हल्ला चलाइए पनि त्यो व्यक्तिगत ईर्ष्या र राजनीतिक कारणले हो भन्ने हल्ला अहिले नेपाली समुदायमा चल्न थालेको छ। किनकी अधिकांस हङकङ नेपाली महासंघको सदस्य संस्थाले हङकङ नेपाली महासंघले राम्रो कार्य गरेको ठहर गरेका छन्। सोही कारणले गर्दा हरेक कार्यक्रममा ती संस्थाहरुको उपस्थिति देखिन्छ र हङकङ नेपाली महासंघले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा व्यापक सहभागिताले पनि त्यो कुरा पुष्टि गरेको देखिन्छ।
नेपाली समुदायमा मिथ्या हल्लाहरु आएका छन्। नेपाली समुदाय भवनका लागि जम्मा गरिएको रकम अध्यक्षले आफनो खुशीलॆ अपचलन गरेको भनेर पत्रिकामा आएको छ। तर त्यो सत्य नभएको प्रमाणित गर्न गत हप्ता हङकङ नेपाली महासंघले सबै संस्थाहरुलाई विशेष बैठकमा आमन्त्रण गरेर आफूसंग भएको विवरण प्रस्तुत गरेको थियो। प्रस्तुत विवरणमा महासंघको आर्थिक कारोबार चुस्त र दुरुस्त रहेको दावी उपस्थित संघ संस्थाका अध्यक्ष तथा सदस्य प्रतिनिधिहरुले गरेका थिए। समुदायमा गलत प्रचार प्रसार गरेर आफनो व्यक्तिगत राजनीतिक फाईदा लिन खोजेको अनुमान सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिहरुले गर्न बाध्य भएका छन् अहिले।
Manchester City's Walker faces lockdown breach investigation